इजरायल बारे जानकारी कहाँ लिन सकिन्छ ?
Fri, Feb 21, 2020 | 18:08:42 NST
दीपक शर्मा / ललितपुर
प्रश्न : म इजरायल जान चहान्छु । के के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यो पनि थाहा पाए तर कहाँ सम्पर्क राख्ने थाहा भएन । अनि हिब्रु भाषाको ठाँउमा‌ अंग्रेजी भए हुदैन ? जानकारी गराइ दिनु भए आभरी हुने थिए ।
उत्तर : नेपाल सरकार र इजरायली सरकार बिच भएको सम्झौता बमोजीम केयर गिभरमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । दक्षिण कोरिया जसरी नेपाल सरकारले नै पठाउछ । यो महिला र पुरुष दुबैको लागि हो । तर केहि हदहरु तोकिएको छ जस्तै : केयर गिभर सम्बन्धि ३ महिने तालीम लिएको हुनु पर्यो वा प्र्याक्टीकल नर्सिङ पढेको हुनु पर्यो । अंग्रेजी भाषा वा हिब्रु भाषा अनिर्वाय आउनु पर्यो । अरु पनि हदबन्धि छन जस्तै : एस एल सी पास, २५ देखि ४५ उमेर समुहको, उचाई कम्तिमा ५ फिट, वजन कम्तिमा ४५ के जि । तलको लिङकमा गएर बिस्तृत जानकारी लिन सकिन्छ ।